Duqeymo markale lagu garaacay Baardheere | Gedoonline
Duqeymo markale lagu garaacay Baardheere	Added by khabar on December 10, 2011.Saved under Latest News	Baardheere(GMN)-Diyaaradaha nooca Miiga ah ayaa lagu soo waramayaa in duqeymo xaga cirka ah ay ka fuliyeen maanta oo sabti ah gudaha degmada Baardheere ee Gobolka Gedo.
Ilaa Sedax Gantaal ayaa lagu soo waramayaa in lagu garaacay gudaha degmadaasi oo ay ka arimiyaan Ururka Shabaab.
Mid ka mid ah Gantaalaha ayaa waxa uu ku dhacay goob isbitaal ah oo ay maamusho Hay’ada bisha cas isla markaana ;lagu daweynayey Caruur
Gantaal kale ayaa dadka deegaanka waxa ay sheegayaan inuu ku dhacay goob iskuula ah oo hase ahaate xiligaasi aysan ku sugneyn wax arday ah
Goob joogiyaal ku sugan Baardheere oo Gedo Online la hadlay ayaa sheegay in gantaalka kale uu ku dhacay xero ay ku tababaranayeen Ciidamada Kooxda shabaab.
War laga sii daayey idaacad ku hadasha Afka shabaabka ayaa lagu baahiyey in diyaaradaasi ay beegsadeen keliya goobo ay ku sugnayeen dad rayid ah isla markaana aysan jirin in lagaraacay xero ay ku jireen shabaab.
Ilaa hada lama oga qasaare ka dhashay duqeynta markale ka dhacday degmada Baardheere oo ka mid ah magaalooyin Kenya ay hore u calamadeysay in duqeynayso.
Maalmo ka hor ayaa sidan oo kale waxa duqeymo ay ugu dhaceen degmada Baardheere waxana duqeyntani ay noqonaysaa tii labaad oo ka dhacda Baardheere
Shabaab oo howlgal ka fuliyey Baardheere
Baardheere oo Shabab ka furay xero diwaan galin
Baardheere Oo Dumar Lagu Karbashay
Shabaab oo isku aruursanaya Baardheere
Dowlada oo weerar ku qaaday duleedka Baardheere